चिहान खनेर मान्छे निकाल्दा यस्तोसम्म भयो, खुल्यो १२ बजे रातिको डरलाग्दो भित्री रहस्य, आत्मा चढेकी दिदिले बताइन नालीबेली (भिडियो सहित) - नेपाली खोज
सन्सार छोडेको ६ बर्षपछी आत्मा भड्किएर हिड्छ होला! कसैले पत्याउनै नसकिने घटना मोरङको बेलबारिमा घटेको छ । एकाएक सबै गाउँले बिरामी पर्दै आत्मा पसेर दुख दिन थालेपछि गाउँ नै चिन्तामा परेको छ । करिब छ बर्ष अगाडी मृत्यु भएका जीवन राईको आत्मा हरेक बिरामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्रसित बनेको छ ।
बच्चादेखि वृद्ध सबै बिरामी परेपछी धामी ले चिन्ता बस्न सुरु गरेको तीन दिनसम्म पनि केही पत्ता नलागेपछि केही गाउँलेहरुले धामीलाई कुटपिट समेत गरेका थिए । चार दिन चार रात नसुती धामी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन भएका जीवन राईको चिहान खनेर हेर्नुपर्ने भनेर झाक्रीले भनेपछी सुरक्षाकर्मी र गाउले बुद्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रातको 12 बजे चिहान खनेर हेर्दा कसैले नसोचेको दृश्य देखिएपछी सबै गाउलेहरुले धामीलाई माफी मागेका छन ।
ज्यान जोखिममा राखेर सफलता पाउने झाक्रीलाई भगवान मानेर पुरै गाउँलेहरुले सम्मान समेत गरेका छन । जिबनको आत्मा चढेकी दिदिले खोलिन ६ बर्ष अगाडी सन्सार छाडेका जीवन राइको बिगत घटनाको सम्पुर्ण नालीबेली र भित्री रहस्य सबैको होस उड्यो । आत्माले गाउँमा यस्तोसम्म गरेको रहेछ । सबै चकित बनाउने तलको भिडियो हेर्नुहोस होस उड्नेछ …
काठमाडौ उपत्यकामा ह्वातै बढे संक्रमित ? उपत्यकामा १५ हजार सक्रिय संक्रमित, आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव
यी राशिका व्यक्तिमा हुने गर्दछ बाल्यकालदेखि राजयोग (भिडियो)